Ulungelelwaniso lweNtengiso kunye neNtengiso: Uqikelelo oluphezulu lweKamva | Martech Zone
Ulungelelwaniso lweNtengiso kunye noThengiso: Uqikelelo oluphezulu lweKamva
NgoLwesihlanu, ngoDisemba 2, 2016 NgeCawa, uDisemba 4, 2016 Douglas Karr
Kutshanje siye saba mnandi udliwanondlebe noGiles House kwaye esinye sezihloko zengxoxo besinjalo ulungelelwaniso lokuthengisa kunye nentengiso. Entsha kolo dliwanondlebe, NgaphakathiBukela Kutshanje kupapashwe ezi ntelekelelo zentengiso kunye nokulungelelaniswa kwentengiso Zisekwe kwincwadi entsha, Ukulungelelaniswa ukufezekisa: Ungamanyanisa njani amaQela akho oThengiso kunye noThengiso ukuba abe liQela elinye lokuKhula, ebhalwe ngu-InsideView's CMO Tracy Eiler, kunye ne-VP yeNtengiso yeShishini u-Andrea Austin.
Uqikelelo lwalusekwe kwiziphumo zovavanyo olwenziwe kwi-1,000 iinkokeli zentengiso kunye nentengiso. Uphando luka-Eiler kunye no-Austin lubonisa ukuba ingxaki yokungalungelelani iyaqhubeka nokukhula kwaye ukunqamka kunefuthe ngqo kwingeniso.
Ulungelelwaniso lokuthengisa kunye nentengiso ngumba weqhosha elishushu ukuba iinkampani zijolise ekuzilungiseni kube kanye. Ayikokugcina nje ukuthengisa kunye nentengiso ekubeni kwindawo yomqala yomnye; Kungenxa yokuba ulungelelwaniso liguqulela kwingeniso kunye nokukhula ngokukhawuleza. Ke, yintoni elandelayo elandelayo? Emva kweenyanga zokuncokola noontanga, siqikelele ukuba sicinga ukuba ulungelelwaniso luya phi ukuze iinkampani zihambele phambili. I-Tracy Eiler, i-CMO ye-InsideView
Ababhali banikezela ngezi zibikezelo zisixhenxe zilandelayo ngekamva lokuthengisa kunye nolungelelwaniso lwentengiso njengoko amashishini eqonda izibonelelo zolungelelwaniso lwentengiso kunye nentengiso kwaye ezilungiselela ukonyusa iinzame zokulungelelanisa ngo-2017:
Ukunyuka komthengisi wokubonisana. Abathengisi abaphumelele kakhulu baya kuba ngabathengisi be-hybrid. Ngo-2020, isidingo sabathengisi be-B2B siyakutshintsha ukufuna ngakumbi "umthengisi wokubonisana," ngokweForrester Research. Abathengi benza uphando ngakumbi ngokwabo kwaye abasafuneki kubathengisi abasekwe kwintengiselwano, ke imodeli yokuthengisa ngokwesiko kufuneka ihlengahlengise. Aba bathengisi bathetha-thethayo baya kuba ziingcali kwishishini labo, iimveliso, ii-personas zabathengi, kunye nohambo lwabathengi, kwaye baya kufuna amandla okuthengisa apha endleleni. Amanye amashishini aya kuqala ukudibanisa ukuthengisa kunye nentengiso kumaqela afanayo.
Uqeqesho olunqamlezileyo luya kuba yimfuneko. Abasebenzi abanqweneleka kakhulu iya kuba ngabo bafuna amava angaphaya kwesizinda sabo sobuchule, kubandakanya abathengisi abakuqondayo ukuthengisa kunye nabathengisi abanemvelaphi yentengiso. Iinkampani eziqhubela phambili ziya kuthi zibe semthethweni kwaye zikhuthaze uqeqesho olunqamlezayo emsebenzini.
Umbhobho uya kuba yeyona ndlela iphambili yokulinganisa intsebenzo yentengiso.Ngokophando lwe-InsideView, iipesenti ezingama-66 zabathengisi zithi imibhobho yeyona ndlela iphambili abalinganiswa ngayo. Iinkampani ezihambele phambili ziya kuqala ukujonga ingeniso yeqela, apho isahlulo sentengiso nganye iya kuba luxanduva lokuthengisa. Intengiso yenzelwe ukusebenza ngokubambisana ngokusondeleyo kunye nommeli ngamnye ukuya kuthi ga kwinqanaba abanokuthi balichaze ngokuthe ngqo ifuthe labo ngokuthe ngqo.
Lonke uhambo lwabathengi luya kuba li-akhawunti. Amanyathelo e-ABM ayaqhubeka nokwenza ngaphezulu kolunye utyalo-mali lwentengiso, esenza imodeli yempumelelo engazukukhawulelwa kwintengiso kunye nentengiso kwixa elizayo. Zilungiselele ukuba iinkampani zibeke phambili esekwe kwiakhawunti yonke into.
Isicwangciso sedatha sabathengi sibaluleke ngakumbi. Uphando lweshishini lubonisa ukuba amashishini abeka idatha embindini wentengiso kunye nezigqibo zokuthengisa ziphucula ukuthengisa i-ROI nge-15 ukuya kwi-20% (Iqela laseWinterberry). Ukuxhamla kwintengiso eqhubela phambili kunye nentengiso yeteknoloji, iinkampani eziphumeleleyo ziya kubeka phambili iinzame zokuhlengahlengisa kunye nokudibanisa isiseko setekhnoloji kunye nesicwangciso sedatha sabathengi. Ukwenza njalo kuyakuvumela iinkampani ukuba ziphuhlise intsebenziswano, ekwabelwana ngayo ngobukrelekrele babathengi obenza ukuba balungelelanise ngobuchule.
I-Millennials inefuthe elikhulu. Ngo-2016 i-Millennials idlulile i-Baby Boomers njengesona sizukulwana sikhulu sizwe. Oko kuthetha ukuba bayatshintsha ukwakheka kunye neseti yezakhono kumandla wentengiso. I-Millennials ishishini ngakumbi, iyasebenza kwaye iyasebenzisana. Banolindelo olwahlukileyo kwimfundo, unxibelelwano, kunye nenkqubela phambili yomsebenzi. Iinkampani eziphumeleleyo ziya kuqala zilungelelanise izimbo zazo zombutho ukuze zitsale kwaye zigcine ezona talente zibalaseleyo, kwaye ziqwalasele ukuba ngaba abagqatswa bakulungele ukulungelelaniswa njengenxalenye yenkqubo yokuqesha. Kwaye iwaka leminyaka namhlanje ngabathengi bangomso. Iinkampani kufuneka zivumelane nendlela yazo.
I-Academia iyabamba. Iiyunivesithi ziya kujonga iinkqubo ezisesikweni ze-B2B njengezinto ezibalulekileyo ekulungiseleleni abafundi kwilizwe lokwenyani, kwintengiso, kwintengiso, nakwimida yedatha. Lindela ukubona iiyunivesithi ezininzi zibonelela ngeedigri kwintengiso, hayi ukuthengisa okanye ukubalwa kwemali. Kananjalo, amanye amaziko aya kuwenza maxesha amadigri okuthengisa ngaphaya kokuthengisa kwabathengi ukugxila kwi-B2B. Okokugqibela, lindela ngakumbi izidanga ezijolise kushishino kwisayensi nakwedatha kubahlalutyi njengoko idatha ibaluleke ngakumbi kwimpumelelo yeshishini.
Nantsi infographic, Uqikelelo oluphezulu olu-5 lweKamva loThengiso noLungelelwaniso lweNtengiso:
Malunga nokuBuka ngaphakathi
NgaphakathiView amandla eencoko zeshishini zehlabathi, ukunceda ngaphezulu kweenkampani ezingama-20,000 ukuphinda zichaze iindlela zabo zokuya kwintengiso ukusuka kumthamo-osekwe kwindlela ejolise ngakumbi. Ukukhokela kwayo ubukrelekrele bemakethi iqonga linceda ukuthengisa kunye namaqela entengiso ngokukhawuleza achonge kwaye afanele ezona njongo zibalaseleyo, ukuzibandakanya ngokuhambelana ngakumbi, ukuvala amadili amaninzi, kunye nokugcina nokwandisa iiakhawunti. NgaphakathiView yinkampani kuphela eqala ngenkampani echanekileyo yenkampani kunye nedatha yoqhakamshelwano kwaye iyomeleza ngolwazi olufanelekileyo, lwexesha lokwenyani kunye nokunxibelelana okuyinyani.
tags: Intengiso esekwe kwiakhawuntiintengiso yokubonisanaukuthengisa ngokucebisanaCRMuqeqesho olunqamlezileyoidatha yomthengiulungelelwaniso lwentengisointengisomomeulungelelwaniso lokuthengisaukuthengisa kunye nentengisoulungelelwaniso lokuthengisa kunye nentengisointengiso yokusebenza
UGoogle wandise iiLunch zabathengisi boVavanyo
Iiarhente ezingonelanga zixelela amathemba okuba uhambe